Thermomix को साथ मर्सियन ईस्टर केक कसरी बनाउने ThermoRecines
मिठाई90 मिनेट300२ क्यालोरी
को ईस्टर केक तिनीहरू, कर्डियलको साथ छन् जुन हामी अर्को दिन प्रकाशित गर्नेछौं, मर्सियन क्रिसमसको विशिष्ट मिठाईहरू।
त्यहाँ धेरै वर्ष बसे पछि, घरमा हामी सँधै क्रिसमसमा यी स्वादिष्ट पदार्थहरू बनाउँछौं। के तपाईंलाई सम्झना छ? zarangollo? म तपाईंलाई त्यो पोस्टमा जस्तै नै भन्दछु, तिनीहरू बाँकी स्पेनमा रेसिपीहरू थोरै ज्ञात छन् यद्यपि तिनीहरू यति धनी छन् कि उनीहरू विश्वव्यापी रूपमा चिनिनुपर्दछ!
यस अवस्थामा तिनीहरू केकहरू बनाइएका छन् अल्मेन्द्र टोस्ट, सौंफ (मदिरा र अन्न), सुन्तलाको जुस, पाइन नट्स ... के मिश्रण! बिहानको खाजामा तिनीहरू स्वादिलो ​​हुन्।
म तपाईंहरू सबैलाई उनीहरूलाई प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछु, विशेष गरी उनीहरू जसले एक सानो - वा धेरै - सम्झिन्छन् मर्सियन पेस्ट्री। Thermomix को साथ तिनीहरू गर्न को लागी धेरै सजिलो हुन्छ र तपाइँ परिणामलाई मनपर्नुहुनेछ।
1 इस्टर केक
इस्टर केक मर्सियन पेस्ट्रीको विशिष्ट क्रिसमस मिठाई हुन्। बदाम, पाइन नट, सौंफ, सुन्तला ... को साथ प्रयास गर्नुहोस्, तिनीहरू मर्सिया जस्तै स्वाद!
Skin 350० ग्राम बदाम छाला बिना (आटाका लागि २230० ग्राम र बाँकी सजाउनको लागि)
२०० ग्राम ताजा सुन्तला को रस
११० एनीस लिकुरको
Sugar450० ग्राम चिनी (आटाका लागि g०० ग्राम र सजाउनको लागि बाँकी)
१० g ताजा प्रेस गरिएको बेकरको खमीर
एनिस गेडाहरूको १० ग्राम
बेकिंग सोडाको १/२ चम्मच
650 g ताकत आटा
हामी भट्टीमा पन्डे बदाम टोस्ट गर्छौं (लगभग १०-१२ मिनेटको लागि १º०º मा ओभन)।
हामीले बदामलाई सिसामा राख्यौं। भित्र गति चयनकर्ताको साथ बन्द गिलास हामी दिने छौं दुई टर्बो स्ट्रोक। हामी एउटा कचौरा र रिजर्भमा हटाउँछौं।
तेल, सुन्तलाको रस, एनीज लिकुर, 300०० ग्राम चिनी, खमीर, अण्डा र एनिस बीन्स गिलासमा राख्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
बाइकार्बोनेट र आधा आधा -325 g- र प्रोग्राम थप्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 30।
बाँकीको पीठो, २230० ग्राम बादाम र पाइन नट र प्रोग्राम थप्नुहोस् २ मिनेट, गिलास बन्द, स्पाइक गति। यस समयमा, हामी समय समयमा यो स्वरको माध्यमबाट स्प्याटुला परिचय गराउँदछौं र सामग्रीहरूलाई एक समान घुँडा टेक्न प्राप्त गर्दछौं। हामी आटालाई glass० मिनेटको लागि गिलासमा आराम दिन्छौं।
हाम्रो हातले अलि तेलले तेल लगाएर हामी आटाको केही अंश लिन्छौं, हातमा बल राख्छौं र यसलाई कामको सतहमा स्क्वाश गर्दछौं (म सिलिकॉन सिट प्रयोग गर्दछु तर यदि तपाईंसँग छैन भने, नबिर्सनुहोस् तपाइँको वर्कटपमा अलि अलि तेल राख्नुहोस्)। हामी त्यस भागलाई करीव -8-१० सेमी सेकेन्डको सर्कलमा आकार दिन्छौं। बदाम र बाँकी चिनीको साथ केक छर्कनुहोस्। हामी यसलाई २० मिनेट आराम गर्न दिन्छौं।
लगभग २० मिनेटको लागि १º०º मा प्रिहिएटेड ओभनमा बेक गर्नुहोस्।
थप जानकारी - Zarangollo मर्सियानो
स्रोत: हाम्रो क्षेत्रीय खाना
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: क्षेत्रीय भोजन, क्रिसमसको
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » क्षेत्रीय भोजन » इस्टर केक
एम्पारो भ्यालेस लोपेज भन्यो
तिनीहरू स्वादिलो ​​हुनुपर्दछ, दुबै पेस्ट्रीहरू र नमकीन मर्सियन खाना धेरै राम्रा छन्। म तपाईंलाई एउटा अनुमोदन दिन चाहन्छु, राम्रोसँग दुई, के तपाईं मर्सियन मासु पाईहरूको लागि नुस्खा प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ? मैले उनीहरूलाई धेरै समय अघि प्रदान गरें र ती स्वादिष्ट थिए। र अर्को। के तपाईं तरल कारमेल राख्न सक्नुहुन्छ जुन हामी सिलिकन मोल्डमा घरमा बनाउँछौं?
तपाईको पृष्ठमा धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई छ, म यसलाई हरेक दिन पालन गर्छु र महान व्यंजनहरू। एक सानो चुम्बन !!!
Amparo Vallés López लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै स्वादिष्ट केकहरू प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। मासु पाईमा ... कस्तो रमाईलो! मलाई थाहा छ कि मर्सियन कन्फेक्शनरीमा उनीहरूलाई बनाउने काम सजिलो छैन, तर म क्रिसमस सकियो भने केही टेस्ट गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु। यदि मैले केहि समान पाएँ (उही उस्तै गर्न असम्भव हुने छ) म निश्चित छु म तिनीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु।
सिलिकॉन मोल्डहरूमा क्यान्डीको सम्बन्धमा, सत्य यो हो कि मैले यसलाई चलाएको छैनँ तर मलाई लाग्दैन कि तपाईंलाई एक समस्या छ किनभने त्यो सामग्रीले धेरै उच्च तापमान स्वीकार गर्दछ।
एक हजार धन्यवाद तपाईलाई दैनिक रुपमा पछ्याउनु भएकोमा। मेरा दुबै सहकर्मीहरू र म तपाईंलाई माया गर्दछु कि तपाईले हाम्रा व्यंजनहरूमा भरोसा गर्नुहुन्छ।
माफ गर्नुहोस्, तर यी मर्सियन इस्टर केकहरू होइनन्, बरु यो सेभिलमा बनेको पीठो जस्तो देखिन्छ र यससँग केहि धेरै स्वादिष्ट डोनट्स
Nokarlesno लाई जवाफ दिनुहोस्
म भन्न चाहन्न कि यी केकहरू खराब छन् वा केहि पनि, तर ती मर्सियन इस्टर केकहरू होइनन्, मलाई थाहा छ किनकि मैले तिनीहरूलाई धेरै चोटि खाइसकेको छु, मैले तिनीहरूलाई कहिले पनि बनाएको छैन। मैले जे गरें र हरेक क्रिसमसमा म रिस बनाउँछु। केक र सौहार्दपूर्ण
कुन कन्फेक्शनरीमा तपाईं तिनीहरूलाई सामान्यतया किन्नुहुन्छ? यदि तपाईंले रेसिपी पत्ता लगाउनु भयो भने यसलाई साझा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। चुम्बनहरू!
के तपाईंले बहिनी ईवाले भनेको देख्नुभयो? पहिचान गर्नुहोस् कि त्यहाँ धेरै प्रकारका रेसिपीहरू छन् र अरूले सौंफ, पाइन नट र बाइकार्बोनेट प्रयोग गर्दछन्, जुन हामीले प्रकाशित गरेका छौं!
म अनुमान गर्दछ किन किन ती धेरै तपाईलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो देखिदैनन्।
तपाईले यहाँ राख्नुभएका व्यक्तिहरू राम्रो छन्, तर म तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछु अरुलाई कोशिस गर्न, तपाईले देख्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि बाइकार्बोनेट कुरा त्यस्तो हुनेछ कि तिनीहरू किण्वित हुनेछन् र तिनीहरूलाई समय छोडदैनन्
र ती मात्रा थर्मोमिक्सको गिलासमा फिट हुन्छन्?
MaAngeles लाई जवाफ दिनुहोस्
म तिनीहरूलाई सँधै ती मात्रामा बनाउँदछु र त्यो नुस्खा पछ्याउँदै। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ।
तपाईले मर्सियानो मीटलोफ मोल्डहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ http://www.lahojalateria.es, ईस्टर रोल (मर्सियन मार्जरीन मन्टेकाडोस), एन्जिल हेयर केक वा डोनट प्रकारका लागि पनि मोल्डहरू, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई pdf मा पूर्ण सूची पठाउनेछौं।
ला HOJALATERIA डे पोर्टल, SL